Zvishandiso - Shandong Subang Fluorescence Technology Co., Ltd.
Optical brightener inobata UV mwenje uye inoburitsa simba iri munzvimbo inooneka seblue violet mwenje, zvichibva zvagadzira chena mhedzisiro mumapolima.Saka inogona kushandiswa zvakanyanya muPVC, PP, PE, EVA, engineering mapurasitiki uye mamwe mapurasitiki egiredhi epamusoro.
Optical brightener inoshandiswa muindasitiri yekudhinda machira uye dhayi kuita chena cellulose fiber, nylon, vinylon uye mamwe machira ane yakanakisa kuchena kupararira, nhanho yekudhaya maitiro uye kuchengetedza kwemavara.Iyo yakabatwa fiber uye jira zvine ruvara rwakanaka uye kupenya.
Painting & inki
Optical inopenya inogona kutora UV mwenje uye inoburitsa yebhuruu violet fluorescence kuvandudza kuchena kana kupenya kwependi.Panguva imwecheteyo, inogona kuderedza kukuvadzwa kwe ultraviolet, kuvandudza mwenje wekudzivirira uye kuwedzera hupenyu hwebasa rekupenda kunze uye kwezuva.
Optical brightener inogona kusanganiswa musynthetic detergent poda, kirimu yekuwachisa, uye sipo kuti zviitwe chena, crystal clear uye kureba pakuonekwa.Inogonawo kuchengetedza kuchena uye kupenya kwemicheka yakashambwa.
zvepakati zvinoreva semi-yakapera zvigadzirwa uye zvepakati zvigadzirwa mukuita kwezvimwe zvigadzirwa.Inonyanya kushandiswa mu pharmacy, mushonga wezvipembenene, dhayi synthesis, optical brightener kugadzira uye mamwe maindasitiri.
© Copyright 20102021 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.	Subang Chemcial Optical Brightener 52 Shandong Subang Optical Brightening Agents Ranipal WG Fluorescent Brightener SWN >